Febraayo 2012 | RayHaber | raillynews
Bilaha: Febraayo 2012
GSM-R waxay taageertaa helitaanka furan ee maraakiibta maraakiibta ee Czech Republic
Maareeyaha kaabayaasha SŽDC, oo leh Kapsch CarrierCom, oo ah bisha Juun 2013 172 km - Ústí nad Labem - Melnik - Vsetaty - Naqshadeynta khadka De-Kolin [More ...]
FGC Jaén waxay ka caawisaa hawlaha taraamka
Duqa magaalada Jaén José Enrique Fernández de Moya iyo 4.7 oo uu wehlinayo madaxweynaha FNC Enrico Ticó kormeerka iyo qandaraasyada gobolka Catalan iyo khadka tareenka fudud ee 27 km ee magaalada [More ...]
Mashhad - Mashruuc korontada ee mashruuca ayaa la bilaabay
Wasiirka Wadooyinka Iiraan iyo Horumarinta Magaalooyinka 1 ayaa ka qeyb galay xaflada mashruuca korantada ee qadka Mashhad-Tehran, oo si rasmi ah loo bilaabay bishii Feberaayo. Qeybta koowaad ee mashruucan ayaa la filayaa in lagu dhammeeyo bilaha 24. Koronto iyo kaabayaasha [More ...]
Hay'adda Tareenada ee Yurub (ERA) - maamulka kaliya ee tareenada ee Yurub
Marka loo eego aragtida guud ee mustaqbalka ee ay soo bandhigtay Wakaaladda Tareenka ee Yurub (ERA), Shirkadda Wadooyinka Tareenka ee Yurub iyo Shirkadaha Kaabayaasha (CER) iyo ururkooda wax soo saarka ee hoos yimaada bishii Febraayo 28, oo ah shahaadada badbaadada kaliya ee Yurub. [More ...]
Turkey baabuur Industries Inc. (TÜVASAŞ) (BID) Initiative Business Tilmaamaha by Initiative Business Tilmaamaha of 'ugu Summit Award Tayada The World ayaa' sida lagu qeexay 'abaabulay abaal Category International Award Tayada Gold. BID [More ...]
Dumarka indhaha Metrobus
Haweeneyda darawalnimada ah ee 6 ee ka shaqeysa Magaalada Bus ee Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Bus waxay soo jiidataa feejignaan weyn xagga rakaabka. Haweeneyda IETT chauffeur 6 oo ka shaqeysa duullimaadyada Kadıköy-Fenerbahçe ee Istanbul waxay soo jiidaneysaa dareenka rakaabka. Haweeney marka hore markay baska fuulaan [More ...]
Bombardier iyo Uralvagonzavod waxay abuurayaan iskudubarid wadajir ah
Tareenka iyo soo-saaraha gawaarida gaashaaman Uralvagonzavod waxay la saxiixdeen heshiis iskaashi ganacsi oo ay la leeyihiin Bombardier si loogu dhiso qadka tareenka ee Yekaterinburg. Uralvagonzavod, dhererka sagxadda 350 mm iyo 210 wadada tareenka [More ...]
Gaadiidka Cankiri-karabuk ayaa loo furay gaadiidka.
Wadada tareenka ee Çankırı-Karabük ayaa xirma baraf xoog leh awgiis iyo gaadiid nooc ah ayaa la furay. Çankırı, 2 baraf ah oo soconaya maalmo ayaa saameyn xun ku yeeshay nolosha. Waxaa la heli karaa shalay fiidkii sababo la xiriira baraf dartiis iyo nooca [More ...]
Shalay iyo tareenka High-Speed ​​Maanta ee Turkey
Turkey ayaa riyo iyo afartan sano ee tareen-xawaaraha sare wuxuu bilaabay inuu waqti Ankara-Eskisehir. Kun kun oo kiiloomitir 76 kiilo oo cusub ayaa la dhisay. Kalabar khadka tareenka ee jira ayaa la cusbooneysiiyay. 2002'da 111 milyan oo kharashyada maalgashiga TL ah, 2010'da 2 [More ...]
Ereğli waa gawaarida labaad ee telefishanka!
Duqa Eregli Halil Posbıyık'ın ma ogi in waraaqaha doorashada Göztepe'ye aysan ogeyn balanqaadka gawaarida fiilada! Hadalka Posbıyık ee ku saabsan gaarigaan fiilada leh wuxuu ahaa mid walwal badan kaftan ah waqtiyadiiba Ereğli… Ku adkeyso! Si toos ah ula xiriir Halil [More ...]
Hadafka Tram ee magaalada Bursa waa in la gaaro goobaha
Ka jawaab tuhunka taraamka! Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Recep Altepe, oo khadka tareenka u qorsheeyay badhtamaha magaalada, ayaa sheegay inaysan jirin carqalad farsamo. Altepe wuxuu kajawaabay su’aalaheena AS TV wuxuuna cadeeyay in “mashruucu uusan u suurta gelin jiilaal dheer” [More ...]
Shaqaalaha Marmaray ayaa ku guuleystay kiiska
Shaqaalaha Marmaray, Istanbul 4. Caydiid Caydiid waxaa ogolaaday Maxakamada Cassation. Go'aanka, Polat Construction wuxuu oggol yahay in shaqaalaha 27 ee laga ceyriyo shaqada uu dib u soo laaban doono iyo in 4 uu bixin doono magdhowga shaqo la’aanta billaha ah. [More ...]
Dunida by majaladda Forbes; 12 khadka taraamka caanka ah ee leh qaababka sida qadka ugu dheer
Adduunyada by majaladda caanka ah ee Forbes; 12 Khadadka taraamyada caanka ah oo leh aragtiyaha ugu quruxda badan, kuwa ugu dadka badan iyo safka ugu dheer. Wadada tareenka ee Odessa, Ukraine [More ...]
Khadadka xawaaraha Karaamas-Bagcilar
Sida lagu sheegay bayaanka ay soo saareen Istanbul Ulasim AS, waxaa ku burburay xadhkaha tukaanka catenary-ka ee gobolka Capa dhanka khadka tareenka Kabatas-Bagcilar. In kasta oo duullimaadyada u dhexeeya Yusufpaşa-Topkapı aan la sameyn karin in muddo ah, haddana gaadiidku wuxuu qadka ku dhigi karaa inta u dhaxeysa Kabataş-Yusufpaşa iyo Topkapı-Bağcılar. [More ...]